AMP: fandraisana an-tanana ny loharano misokatra an'i Google hanatsara ny tranonkala | Avy amin'ny Linux
Teknolojia fanta-daza AMP (Accelerated Mobile pages) Sa tsotra, Pejy finday haingam-pandeha (PMA), amin'ny Espaniôla, dia iray amin'ireo maro Hetsika loharano misokatra an'i Google, izay amin'ity tranga ity, dia mitady hanatsara ny fampisehoana ny tranonkala finday.
Manokana, amin'ny fanehoana ilay andian-teny hoe "manatsara ny fahitana ny tranonkala finday," tianao holazaina dia mahatratra ny tanjon'ny manatsara ny hafainganam-pandehan'ireo tranonkala amin'ny finday marani-tsaina.
Google ary ireo hafa voarohirohy amin'ny teknolojia voalaza fa, mahafantatra fa ny Fikarohana amin'ny fitenenana fitaovana entin-tanana efa nihoatra ny fivezivezena notanterahina avy amin'ny solosaina birao, farafaharatsiny amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao, dia nanao ezaka hanomezana ny fahaiza-manao sy / na ny fotodrafitrasa izy ireo ka misy tsikelikely pejy web kely na tsy nohamarinina hijerena ireo fitaovana finday toy izany.
1 AMP - Pejy finday haingam-pandeha
1.1 Inona ny atao hoe AMP?
AMP - Pejy finday haingam-pandeha
Inona ny atao hoe AMP?
Mitanisa ny tranokalan'ny tetikasa manokana, nantsoina AMP Dev, ity teknolojia ity dia:
"Rafitra HTML loharano misokatra izay manome fomba mahitsy hamoronana pejin-tranonkala haingana, milamina tsara ary manome laharam-pahamehana ny traikefan'ny mpampiasa mihoatra ny zava-drehetra.".
Izay mahatonga azy io ho fitaovana sarobidy amin'ny fananganana tetikasa tranonkala lehibe sy mahomby mifantoka amin'ny fivezivezena.
Ary mitanisa ny fanadihadiana nataon'ny orinasa iray antsoina hoe Kissmetrics:
"Raha aorian'ny 3 segondra dia tsy miseho tsara ny takelaka misy azy eo amin'ny tobim-pifandraisana misy azy ireo, 40% ny mpampiasa tsy manam-paharetana ary, amin'ny farany, manatona ny pejy na avelao aloha.".
Ary eo no misy ny Teknolojia AMP mifantoka, amin'ny alàlan'ny mekanisma na fizotra teknika misy amin'ireo mpandahatra programa na mpitantana ny tranokala, azon'izy ireo atao manatsara su fampisehoana ho an'ny iray sary an-tsaina tsara kokoa, amin'ny fitaovana finday marani-tsaina.
Ary izany rehetra izany dia matetika satria, ankoatry ny zavatra hafa, mampiasa ny AMP Technology:
HTML5 novaina, misy tsoratadidy sy singa fanampiny.
Tambajotra fizarana atiny (CDN) izay mitahiry ny atin'ny pejy ao anaty cache amin'ireo tahiry samihafa amin'ny rahona.
Miaraka amin'ny Teknolojia AMP, ireto endri-javatra na tombony manaraka ireto dia azo tratrarina na azo avy amin'ny pejin-tranonkala izay mampiasa azy:
Ampidiro ny pejy AMP haingana kokoa ny 85% raha ampitahaina amin'ny endrika mahazatra.
Hahatonga ny fampidinana tranonkala iray feno fahombiazana ao anatin'ny iray segondra.
Mampihena ny fihinanam-bola amin'ny haavon'ny 10 heny ambany, vokatr'izany dia mampihena ny angovo azo ampiasaina amin'ny batterie finday.
Hatsarao ny kalitaon'ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny tranonkala, izay mety hampitombo ny isan'ny fitsidihana sy ny faharetan'ny mpampiasa ao aminy.
Ampitomboy ny fametrahana ny organika (SEO), noho ny zava-misy fa ny hafainganan'ny famoahana ny atiny sy ny fahitana azy mora foana, indrindra amin'ny fitaovana finday, dia manohana ny fanombanana tsara izany, ao amin'ny Google algorithm.
Lfamerana ny fahafahany mametraka zavatra sasantsasany toy ny horonantsary na bokotra manokana, toy ny bokotra hahazoana rohy mankany amin'ireo tambajotra sosialy. Izany dia satria, azo atao ihany ny mampiasa tag HTML navela na mitovy aminy, ary tag toy ny tag, toy ny "zavatra" o "filanjana", tsy azo ampiasaina.
Ny fitomboan'ny fahasarotan'ny kaody HTML5 mahazatra, satria ireo singa ilaina hampiasa azy io, dia mahatonga azy io ho sarotra kokoa, ho an'ireo izay tsy voaomana amin'ny resaka fikirakirana na ny fahazoana ireo kaody voalaza.
Ny fitomboan'ny haben'ny pejy noforonina, noho ny fitomboan'ny mari-pamantarana ilaina sy ny famerana ny fisorohana ny famoahana ireo takelaka CSS style ivelany
Ianao sy ireo zavatra lehibe hafa an'ny Teknolojia AMP noforonin'i Google ary tohanan'ny lehibe hafa amin'ny Internet, toa ny Twitter, Facebook ary ireo kely kokoa, izay mazàna mifantoka indrindra amin'ny sakany amin'ny famoahana atiny, tranokalam-baovao, no nahatonga azy io manatsara fampisehoana amin'ny tranokalan'izy ireo avy.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «AMP», inona no dikan'izany «Páginas Móviles Aceleradas», ary ny anarany dia avy amin'ny andianteny amin'ny teny anglisy, «Accelerated Mobile Pages», izay, Google Open Source Initiative hanatsarana ny tranonkala amin'ny finday, dia mahaliana sy mahasoa tokoa, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahafinaritra sy goavambe ary mihamitombo ny fampiharana sy ny «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » AMP: Fandraisana an-tsokosoko an'i Google ho fanatsarana ny tranonkala
misy lesoka kely amin'ny fankasitrahana amin'ny tombony sy fatiantoka
- Ny fidirana amin'ny facebook sy ny tambajotra hafa dia tsy fanararaotana, fa ny fahazoana milaza fampidirana dia mila mampiditra ny amp js ho an'io asa io ao anaty kaody
- misy fatiantoka lehibe, ny fampandrosoana ny amp dia tantanan'ny google, ary mitarika ny fiafarany amin'ny fanovana ny tsy fiandaniana io
- ary ny zava-dehibe iray hafa dia ny fomba fanao mahazatra amin'ny famoronana endrika amin'ny alàlan'ny paositra sy php
Miarahaba anao Cristianhcd! Misaotra anao tamin'ny fandraisana anjara feno ...